အိမ်တွင်းသုံး လက်ဖြစ် ရေသန့်အိုးလေးတစ်လုံး - Page 8 of 26 - Hello Sayarwon
အိမ်တွင်းသုံး လက်ဖြစ် ရေသန့်အိုးလေးတစ်လုံး
စျေးကွက်ထဲ က တချို့ ရေသန့်ဘူးတွေ က စိတ်မချရဘူး ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ဖတ်ဖူးကြတယ်ဟုတ်။ ဒါဆို အိမ်မှာ ရေကို တနိုင် ဘယ်လို သန့်ကြမလဲ။
ရေကို ကြိုချက်သောက်တာလည်း နည်းတစ်မျိုးပေမယ့် လုံးဝ စိတ်ချရတဲ့နည်းတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ လျှပ်စစ်မီးမရှိတဲ့ အခါ …. ကြိုဖို့ချက်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့အခါ … ရေစစ်ကလေးသုံးရုံနဲ့ ပိုးမွှားကင်းစင်တဲ့ရေသန့်ရမှာ စဟုတ်ဘူးလေ။ NGO တွေကဝေတဲ့ ရေသန့်ဆေးမှုန့်တွေ… အပြင်မှာရောင်းတဲ့ ရေကြည်ဆေးတွေလည်းရှိပါရဲ့…. ဒါပေမယ့် ဒီအမှုန့်တွေက ရေထဲက အညစ်အကြေးအနယ်အနှစ်တွေကို ဆွဲစုပေးလိုက်ပြီး ရေသက်သက် အနယ်အနှစ်သက်သက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ အဲဒီ့ရေကြည်မှုန့်တွေကလည်း အလွယ်ဝယ်လို့ မရတဲ့ အခါ… အခုပြောမယ့်နည်းလေးက အိမ်တွင်းတနိုင် ရေသန့်စင်ဖို့ရာ သိပ်ကို အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်! ကဲကြည့်ကြရအောင်ပါ။
(၁) အောက်ခြေမှာအပေါက်ငယ်လေးတွေပါတဲ့ ရေအိုး
( ပလတ်စတစ်ပုံးဆိုလည်း ရတယ်)
(၂) ရိုးရိုးရေအိုး/ ရေသိုလှောင်မည့်ပုံး
(၃) ၂ဆင့်ရေအိုးတင်စင် ( စင်မရှိလည်း တစ်အိုးပေါ်တစ်အိုးထပ်လို့ရရင် အဆင်ပြေပါတယ်)
(၁) ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပစ္စည်းအားလုံးကို ဆပ်ပြာ/ ရေတို့ဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးပြီး အဝတ်သန့်သန့်ဖြင့်သုတ်ပါ။ ( ပိတ်စဖြူကိုတော့ သေချာလျှော်ဖွတ် နေလှန်းပြီး မီးပူထိုးထားပါ..
သဲ/ မီးသွေး နဲ့ ကျောက်စရစ်တွေကိုလည်း ဆေးကြောပြီးတာနဲ့ ဇကာနဲ့စစ်ပြီး နေပူပူမှာ ဖြန့်ပြီး အခြောက်ခံပါ… အပေါ်က ပလတ်စတစ် အကြည်လေးအုပ်ပြီး လှန်းပေးနိုင်ရင် ပို အဆင်ပြေပါတယ်) ။
(၂) ပြီးရင် အပေါက်ပါတဲ့အိုးထဲမှာ အခုနကပိတ်ဖြူကို အနေတော်ဖြတ်ပြီး ခင်းပါမယ်… အပေါက်ကလေးတွေ အကုန်လုံအောင်ခင်းပါ။
(၃) ပြီးရင် အခုနက သန့်စင်ပြီးအခြောက်ခံထားတဲ့သဲကို အိုးရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံရောက်တဲ့အထိ ညီအောင်ညှိပြီး ဖြည့်ပါ ။
(၄) ပြီးရင် အပေါ်က ပိတ်ဖြူ တစ်လွာအုပ်ပါ။ ၎င်း ပိတ်ဖြူ အပေါ်မှာ သန့်စင်ထားတဲ့ မီးသွေး အတုံးကြီးကို အသေးလေးတွေ ဖြစ်အောင် ချေပြီး အိုးရဲ့ အလယ်ပိုင်း ၃ပုံ၁ ပုံ ပြည့်အောင်ဖြည့်ပါ။
(၅) အဲဒီ့ မီးသွေးအလွှာပေါ်မှာ သန့်စင်ပြီး ကျောက်စရစ်များကို ကျန် ၃ပုံ၁ ပုံ မပြည့် တပြည့်ထိ ဖြန့်ထည့်ပါ( ရေထည့်တဲ့ အခါ မလျှံကျအောင် နေရာချန်ခြင်းပါ)
(၆) အားလုံးပြီးရင် စင်ရဲ့ အပေါ်ဆင့်မှာ သည် အပေါက်ငယ်များ ပါတဲ့ အိုးကို တင်ပါ။
သူ့အောက်တည့်တည့်မှာ ရိုးရိုးရေအိုး/ ရေသိုလှောင်မည့်အိုးကို ထားပါ။
(စင်မရှိလျှင် တစ်အိုးနဲ့တစ်အိုး ထပ်ထားလို့ရပါတယ်… အရွယ်အစားကို ချိန်ပြီးဝယ်ပါ)
(၇)မိမိ သောက်/သုံးမယ့်ရေကို အပြင်မှာ ရေစစ်နဲ့ တစ်ထပ်စစ်ထားပါ( ဒါမှ အမှိုက် အရိုက်အမှုန် အမွှား အကြီးတွေ စစ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်)။ ပြီးရင် အဲဒီ့ရေကို အပေါ်က အိုးထဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ပါ။ အပေါ်အိုးထဲကရေတွေဟာ အပေါက်ငယ်လေးတွေကတစ်ဆင့် အောက်ဘက်အိုးထဲကျလာပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးရလာတဲ့ ရေမှာ မီးသွေးမှုန်လေးတွေ အနည်းငယ်ပါတတ်ပါတယ် .. မစိုးရိမ်ပါနဲ့ … အဲဒီ့ရေကို ပဲ အပေါ်အိုးထဲ ပြန်လည်လောင်းထည့်ပြီး နောက်ထပ်တစ်ခေါက်စစ်ယူပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုဆိုကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့ ရေကို စိတ်ချလက်ချသောက်နိုင်သုံးနိုင်ပါပြီ။
– စစချင်း ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို သန့်စင်ဆေးကြောတဲ့ရေက ရေကြည်ရေသန့်ဖြစ်ရပါမယ်။ အထပ်ထပ်ဆေးကြောဖို့လိုပါတယ်။
– သုံးထားတဲ့ ပိတ်စ အမျိုး အစားနဲ့ ရေရဲ့ နောက်ကျိမှု အဆင့်ကို လိုက်ပြီး အဲဒီပိတ်စတွေကို ၂/၃ လ တစ်ခါ သန့်ရှင်းပေး/ လဲလှယ်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
– ၂ လ ၃ လနေလို့ အောက်ကိုကျလာတဲ့ရေမှာ အနယ်တွေပါနေပြီဆိုရင် ဆက်မသုံးဘဲ ရေကြည်ဖြင့် အပေါ်က အကြိမ်ကြိမ် လောင်းပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်… ပြီးတော့မှ ဆက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သည်ရေစစ်နည်းလေးကို သုံးပေးခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့ သောက်သုံးမယ့် ရေမှာ
– အနံ့ အသက် ( အထူးသဖြင့် ဇဝက်သာနံ့) ကင်းစင်ခြင်း
စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ အတူ သန့်ရှင်းကြည်လင်တဲ့ သောက်ရေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ FAME ကထုတ်တဲ့ အသင့်ဝယ်လို့ရတဲ့ ရေသန့်အိုးတွေလည်းရှိပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ် တတ်သွားအောင် သည်နည်းလေး ပေးချင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ရေကြည်ရေသန့် သောက်သုံး နိုင်ကြပါစေ။